Google wuxuu kudarsadaa foomamka waraaqaha Google Martech Zone
Google wuxuu kudarsadaa foomamka waraaqaha Google
Arbacada, February 6, 2008 Douglas Karr
Waxaan ahay qof adeegsada Google Spreadsheets. Google ayaa hada soo kordhisay muuqaal xiiso leh oo dadka suuq geynta laga yaabo inay xiiseynayaan inay qabtaan xogta (tusaale: tartamada iyo barnaamijyada la doorto) iyadoon loo baahnayn horumarin xirfadeed. Hadda waad dhisi kartaa foom aad si toos ah ugu dhejiso Google Spreadsheet-kaaga!
Tani wali way ka fogtahay codsi adag sida Carruur, laakiin waxay ku imaan kartaa waxtar badan foomam deg deg ah oo wasakh ah. Gaar ahaan haddii shirkaddaadu horay u isticmaaleyso Google Apps. Xiiso badan, sidee Microsoft ula tartanta tan? 😉
Tags: qaylodhaanshaneemodashboardfarriimahaaptalktalkromneySlidercabbiraadaha warbaahinta bulshadastadash
Ganacsiga Ganacsiga Cilmi baarista
Ku dar Y! Ku noolow Barbaartaada!
Feb 7, 2008 markay ahayd 10:54 PM
Waad ku mahadsantahay wadaagida… taasi waa waxa aan u baahanahay! Tani way fiicantahay maxaa yeelay uma baahna xisaab google dadka kale ee isticmaalaya. Waxaan doonayay inaan la wadaago warqad-xisaabeed, laakiin qof kastaa ma lahayn koonto, hadda waxay isiin karaan macluumaadka aan u baahanahay aniga oo aan toos uga shaqeynin warqadda.
Weli kiis kale oo macluumaad weyn ka yimid Doug!